यी शानदार वर्ण, कार्लसन जस्तै, सबै समयमा चिन्न। "शान्त, तर शान्त": जसले तपाईंलाई मनपर्ने वाक्यांश भन्नुभयो? हो, यो सबै भन्दा, हास्यास्पद Mischievous र हास्यास्पद, सबै मनपर्ने "प्रत्यक्ष" प्रोपेलर छ। दुवै वयस्क र सबै उमेरका छोराछोरीलाई Astrid Lindgren द्वारा एक कहानी छ। अनुभवहीन, तर धेरै धूर्त वर्ण आइसक्रिम र जाम प्रेम गर्ने। का चरणमा कार्लसन आकर्षित गर्न कसरी हेरौं। यो चित्र पाठ संग पनि साईट ह्यान्डल गर्न।
यो पानी लीक छैन भनेर, राम्रो परिदृश्य कागज लिन्छन्। फोटोकपी लागि पानाहरू फिट छैन। के र कसरी कार्लसन आकर्षित गर्न? यो कार्टून तत्व फिट केदारनाथ, gouache, प्यास्टेल, crayons वा मार्कर fillers ताकि, धेरै उज्यालो र सुन्दर छ। एक सरल पेन्सिल र रबड तयार र बिस्तारै रेखाचित्र थाल्छन्। को आन्दोलन मा नायक को एक योजनाबद्ध, यो हावा मा अलिकति अगाडी मुर्कुट्टा tilting द्वारा निलम्बित भने हुनेछ। हतियार र खुट्टा शरीर राउन्ड सानो रेखा कोर्न र टाउको थप एक गोलो जस्तै छ।
आफ्नो अनुहार र लुगा मा काम
कसरी कार्लसन र आफ्नो अनुहार आकर्षित गर्न? कार्लसन कुनै एक, भ्रमित हुन एक आलु जस्तै आफ्नो नाक, मिठाई kruglyashami आँखा, सानो कान, थियो eyebrows घर र bangs सफा सुग्घर नभएको tousled। Mimicry राम्रो, चम्किलो अभिव्यक्ति हो। रंग चित्र हेर्न र ध्यान वर्णको अनुहार सुविधाहरू विचार गर्नुहोस्।
आफ्नो चित्रकला को अर्को चरण - वस्त्र अन्तर्गत लुकेको छ कि शरीर। कार्लसन - सुशील वर्ण र एक काँध मा एक चिटिक्क सुट छ। एक प्रोपेलर - छोटो आस्तीन आफ्नो शर्ट, त्यहाँ को पाठ्यक्रम, उसलाई छत गर्न चढ्नु मद्दत गर्छ भन्ने मुख्य तत्व बारे मा भूल छैन जूता र। "Karlsson कसरी छत मा आकर्षित गर्न?" - तपाईं सोध्नु। यो सजिलो छ। बाल्यकाल मा हामी सबै साना घरहरू चित्रित। एउटै आवास र कार्लसन, तर यो एक घर को छत मा छ। घर को तल, shingles एक प्याड आकर्षित - यो भवन को छत हुनेछ।
शरीर रंग प्राप्त
रंग ocher एक बिट लिन र अनुहार र हात रंग सुरु, यो प्यालेट मा सुन्तला र रातो रंग मिश्रण गर्न आवश्यक र थप्न लगभग पानी जस्तो रंग हुनुपर्छ। गाला र नाक अलि पुस्तक र हात एक व्यक्ति तिर pritemnite। यो रातो मुख र एक बटन आकर्षित गर्न आवश्यक छ, यो रातो विभिन्न टन, पनि, फेरि प्यालेट आवश्यकता हुनेछ मनमोहक छ। Eyebrows सूक्ष्म खैरो। खुट्टा उठाएर गरिएको छ भने, टुक्रा खुट्टा peeping रंग गर्न नबिर्स। बाल आगोले उज्ज्वल गर्छन्। संतृप्त रंग, राम्रो gouache लिनुहोस्।
हामी overalls बारी, यो, एक bluish tinge बनाइएको छ कसरी मन कुनै पनि। रंग को छाया उज्जवल छ मा, प्रकाश पारदर्शी। पकेट भीड देखि बाहिर खडा प्रकाश हुनुपर्छ। ट्रंक सफा सुग्घर नभएको, सुग्घर, त्यसैले सबै विवरण ठाउँमा थिए निश्चित गर्नुहोस्। रंग संयुक्त थिए, शर्ट कार्लसन हरियो बनाउन। यो शर्ट रंग को प्ले पालन, कतै pritemnyayte कहीं ज्ञान। प्रोपेलर रातो gouache रंग। रंग हल्का को किनारा मा प्रोपेलर को मोटाइ बुझ्न सक्षम हुन। एक भूरा टोन नै तान्ने जूता को वाहेक संग ब्लेड मा छाया जनाउँछ, एकमात्र एक मोटी रंग द्वारा कोर्न सकिदैन।
हामी कार्लसन आकर्षित गर्न कसरी हेर्नुभयो। रेखाचित्र अन्तिम चरण - यो लागि बाटो कार्लसन मा एक स्ट्रोक, पातलो ब्रश र कालो रंग लिइएको छ। zastrochku सुट, braids ड्र र भेषमा Folds। हामी, आँखा उठाउन यो प्राकृतिक र Mischievous हेर्न बनाउन।
यहाँ हामी केही आँखा-पक्रने र सुन्दर अक्षर छन्। हामी विचार "कसरी चरण कार्लसन द्वारा चरण आकर्षित गर्न" पाठ लागि उपयोगी थियो, र अब आकर्षित गर्न र अन्य कहानी र कार्टून वर्ण चाहन्छु।
कसरी आफ्नै रोबोट आकर्षित गर्न?
फ्रान्सिस्को Goya: चित्रहरू। फ्रान्सिस्को Goya: जीवनी
कथा Andreeva "Biter": आवास
फक्स plasticine बाहिर: वयस्क र बच्चाहरु सँगै Hack
फिक्का गुलाबी: विकल्प को विभिन्न
रणनीतिक म्याट्रिक्स Ansoff
बटलर फुट्टर वा बटलर हो? आधुनिक बटलर
खाजा "आर्मेनियाली मा टमाटर": एक विस्तृत नुस्खा